ယိုးဒယားက ဘာသာေ၇အဖွဲ့တစ်ခု၇ဲ့ လုပ်၇ပ် (ကြည့်၇ဲမှကြည့်ပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ယိုးဒယားက ဘာသာေ၇အဖွဲ့တစ်ခု၇ဲ့ လုပ်၇ပ် (ကြည့်၇ဲမှကြည့်ပါ)
ယိုးဒယားက ဘာသာေ၇အဖွဲ့တစ်ခု၇ဲ့ လုပ်၇ပ် (ကြည့်၇ဲမှကြည့်ပါ)
Posted by Tony on Sep 28, 2011 in News | 13 comments
ကြာတော့ကြာပါပြီ……အမြင်ကပ်၇င်…………….comment ပေးပြီး ဆဲသွားလို့၇ပါတယ်။
Tony has written4post in this Website..
လောကတွင် ပညာတတ်သော လူတွေများပါတယ်။ သိတတ်သူတော့ တော်တော်ကို နည်းသေးတယ်။
Tony ရေ… ရွာသူရွာသားတွေကို အရိုင်းအစိုင်းတွေများမှတ်နေလားကွယ်…ပြောချင်ရာပြောဆဲချင်ရာဆဲနေတယ်များ ထင်လားကွယ်…အနောက်က ပို့စ်တွေအရင်ဖတ်ပြီးမှ တင်ပါနော်… အရင်က ဒီပို့စ်ကို ရွာထဲကအစ်မတစ်ယောက်တင်ဖူးပါတယ် နောက်ပြီး ဒီယိုးဒယားအဖွဲ့ရဲ့ … site ကို သေချာရှာပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး……Tony က ရွာထဲမှာဆိုရင်တော့ junior ပေါ့… lone လည်း junior အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်… senior မမ etone တို့ ကိုကို တို့ …နဲ့တွေ့ရင်မလွယ်ဘူးနော်…..
နာ့နာမည်က ပါလေရာလား .. ဟွန်း … ဟို နှမ်းဖြူးမတို့ … ရေကူးချန်ပီယံမတို့ နာမည် ထည့်ရေးပါလား တခါတည်း မပြောကို မပြောချင်ဘူး .. ။
မောင်တိုနီရေ… ပုံတွေတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ကိုရင်လည်း မောင်တိုနီ တင်ပေးထားတဲ့ ပုံတွေကြည့် အသုဘကမ္မဌာန်း ရှူ့သွားပါတယ်… အမြင်လည်းမကပ်ပါဘူး… ဆဲလည်းမဆဲတတ်ပါဘူး…။ ရှူ့တတ်ရင် ဘာဝနာ…. မရှူ့တတ်ရင်တော့ တဏှာပါ…. ဒါနဲ့ ကိုရင်က ယပလက်မှာ တော်တော်ကြာနေဖူးတယ်…။ ယပလက်တွေက မြင်းဆေးသုံးပြီး မုဒိမ်းကျင့်၊ လူကို တစစီဖြတ်လုပ်နေကျဆိုတော့ သူတို့အတွက် အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး…။ အဲ့လူတွေ ယူနီဖောင်းကတော့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ဟုတ်ဟန်မတူဘူး… သိတဲ့လူရှိရင် ပြောပေးကြပါ…
သြော်ကိုရင်နဲ့ lone ကတော့ တွေ့ရပြန်ပြီ.. … ဟဲဟဲ…. အရင်က အစ်မတစ်ယောက်တင်ဖူးတယ်ဒီပို့စ်ကို ခေါင်းစဉ်က စားကြဦးမလား………ဆိုပြီးတော့ အမှန်တကယ်တော့ ဒီအဖွဲ့က ဘာသာရေး အဖွဲ့ပါ….မြန်မာမှာဆို ဦးကျော်သူတို့လိုပေါ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းပါ…သူတို့အသင်းက မကောင်းတာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး…. သူတို့ website သက်သက်ရှိပါတယ်…အရင်က တင်ထားတဲ့အစ်မတောင်မသိလို့ တင်လိုက်မိတာနောက်တော့မှ သိသွားလို့သူတို့အဖွဲ့ကိုကျေှးဇူးတောင်ဝိုင်းတင်ကြသေး…..
ကြည့်ချင်ရင်တော့ “စားကြဦးမလား…………..” ဆိုပြီး gazette ထဲက ခေါင်းစဉ်မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်……ဘယ်လတုန်းကတင်ထားလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး………… ၂လလောက်တော့ကြာပြီထင်တာပဲ…နဲနဲတော့ ကြာပြီ ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေ …. ရှာကြည့်လိုက်ပါ…..
Koyin Sithu သိချင်ရင် အဲဒီလင့်တွေမှာကြည့်ရင် သိမှာပါ
ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်ကို ဆဲချင်နေပါတယ်။ ပုံထဲက လူတွေကို မဟုတ်ဘူး။ Tony ဆိုတဲ့ ခင်ဗျာကို။ ကျွန်တော်ပုံတင်တော့ အားနေလား၊ အလားကား၇တိုင်း တင်နေတာပဲဆို။ ခင်ဗျာကျတော့ ဘာလို့ပုံတင်လဲ။ ဆဲမိတော့မယ်ဗျာ။ နောက်ဆို စကားကို ကြည့်ပြောပါ။ ဘောထဲမှပဲ။အော်……ပြော၇င်ဆို၇င် တစ်လုံးထွက်သွားပြီ။……………….
ရွာသားချင်းရန်တွေမဖြစ်ပါနဲ့….. mandalay gazette အတွက်….. yo..yo… …. အားပေးသလိုများဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်…….
ma phyu phyu says:
အံမလေး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ္တိကောင်းတယ် ထင်ပြီးကြည့်လိုက်တာ ဝေါ့…….။သတ္တိကကောင်းတယ် နှလုံးမကောင်းဘူးဗျ။ အဲဒါဘာလုပ်ကြတာလဲဟင်။ရှင်းပြပါအုံး။
သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိချင်ပါတယ်။ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်လည်းဆို တာ..ချက်ပြုတ်နေတာကော စားနေတာကောဆိုတော့ လူသား စားတာလား ..
တ ကယ်တော့ ဟိုတလော က တင်တဲ့ ကြောင်ကို နင်းသတ်နေတဲ့ ပုံတွေလိုပါဘဲ..
အဲ့ဒါ ကြည့်လိုက်တိုင်း ထမင်းစားချင်စိတ်ပျောက်သွားတာ။ အခုဟာက ဘာလဲလို့ ၀င်ကြည့်တာ ကြည့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစားချင်စိတ် ထပ်ပျောက်သွားပြန်ပြီ။ အဲ့ဒါ ko tony ခင်ဗျား sakura tower မှာ Beer လိုက်တိုက်တော့၊ ထမင်းစားဝင်အောင်။
ဘာသာရေး အဖွဲ့ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ..
ဦးလာဘ တို့ အုပ်စုလား။ ပုံပဲ ပြပြီး အချက်အလက် ဘာ အခြေအမြစ်မှကိုမပါဘူး။ ပုံတွေက ဘာသာရေး တခုခုကို ရည်ညွန်းပြီး စွပ်စွဲသလို ဖြစ်နေတယ်။